Buugga: Sida loo celi farriinta codka Password on iPhone AT & T ama Verizon
Haddii aad tahay user iPhone ah, waxaad u baahan doontaa in dhammaan galladaha ay suurto gal ka phone hesho. Waxaad si aad brand iPhone cusub dhigay kartaa farriinta. Waxay kuu ogolaaneysaa in aad bedesho Salaan ka mid ah oo joogto ah, iyo dadka ka tagi karo fariimaha idiin aad marka aan la heli karin. Apple ee qaabeynta farriinta muuqaalka ah si fudud ku iPhone. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira koox dad ah oo ka cabanaya in ay u halmaanteen la password looduubay oo ay garanayn sida loo damiyo password looduubay oo iPhone ay. Haddii aad sidoo kale waa dhibaato, ha ka welwelin. Just hubi habka soo socda si dib farriinta codka iPhone.
Qeybta 1: Dib u celi password looduubay oo si toos ah iPhone iskaa
Qeybta 2: Wixii AT & T iPhone: 3 fursadaha in ay dib password farriinta codka
Qeybta 3: Wixii Verizon iPhone: 3 fursadaha in ay dib password farriinta codka
Qeybta 4: Talaabooyinka in la qaado in-case haddii aad horay looduubay oo aan shaqayn
Qeybta 5: Sida loo badalo iPhone cod mail qoraal?
Waxaa jira habab dhowr dib password looduubay oo ka iPhone. Marka bixiyaha adeegga aad u ogolaanaya in ay farriinta muuqaalka ah, si toos ah waxaad bedeli kartaa sirta ah ka iPhone keligaa. Waxaad raaci kartaa hoos ku tallaabooyin ay ku bedeli sirta ah iyo mid cusub oo waa xusuus.
Tallaabada 1. Tag Goobta. Scroll in Phone oo ka jaftaa ku yaal. Hadda ka jaftaa on Change farriinta codka Password.
Tallaabada 2. gala password looduubay oo hadda jira iyo tuubada qabtay. (Waxaad u baahan tahay in aad raacdo tilmaamaha hoos ku qoran u sirta ah illoobay. Waxa loo baahan yahay inaad la xiriirto bixiyaha adeegga.)
Tallaabada 3. Ku qor password cusub oo ka jaftaa ku samaysay. Dib-u-qortaa erayga sirta ah oo cusub oo ay mar kale ka jaftaa ku samaysay.
Wixii AT & T iPhone waxaad bedeli kartaa ama dib sirta looduubay oo dhex siyaabaha soo socda.
a) Wac 611 iyo dooran lahayd adeega farriinta codka ah, raac dardar si ay dib sirta farriinta. Waxaa laga yaabaa in u baahan tahay macluumaad ku saabsan xisaabtaada. Habka Tani waxay kaa caawin doonaa soo diraya fariin lacag la'aan ah oo ay ku jiraan password ku meel gaar ah si aad u farriinta. Hadda waxaad bedeli kartaa sirta ah ee aad rabto inaad naftaada by (sida kor ku qoran) .Ama ka jaftaa su'aal ah (?) On box sirta ah> Tubada button wac AT & T ee adeegga yimaado> Markaas raac degdeg ah menu in ay dib ugu password codka ah.
b) Waxa kale oo aad dib karaan farriinta laga soo account online AT & T: Tag celi farriinta codka page Password on my AT & T online page. Tiro aad telefoonka muujin doonaa oo aad dib karaa oo keliya farriinta codka tirada oo keliya. Ka dibna riix si badhanka Gudbi si aad u hesho password ku meel gaadh ah si ay dib sirta farriinta.
c) in aad dib kartaa password looduubay oo ka app ee iPhone. Waxaad u baahan tahay inaad kala soo baxdo myAT free & app T dukaanka inankeeda iyo raac tallaabooyinka ku tilmaamay sida hoos ku qoran:
Tallaabada 1. Open app inuu isbedel u sameeyo password farriinta codka ah. Markaas ka jaftaa on Warbixannada farriinta codka Password doorasho.
Tallaabada 2. Waxaad la helay doonaa bogga soo jeedin ah. Tubada badhanka Warbixannada in ay sameeyaan dib loogu sirta farriinta.
Tallaabada 3.Now sidoo kale waxaad bedeli kartaa Furaha gacanta ka phone iskaa si sir ah xusuus. App wuxuu kuu ogolaanayaa xogta raadraaca isticmaalka iyo lacagta biilka aad iPhone.
a) Waxaad wici kartaa 611 iyo doorashada menu farriinta codka ah, oo aad u baahan tahay in la raaco si degdeg ah ku tilmaamay in la damiyo password. Waxay kuu soo diri doonaa fariin la password ku meel gaar ah, oo aad kala socon kartaa waxbarashada dambe ee AT & T iPhone.
b) Mar, sida AT & T iPhone, waxaad ka heli kartaa app My Verizon Mobile si ay u qabtaan keddibna ka Verizon iPhone. Waxaa jira Warbixannada farriinta codka Password ikhtiyaarka iyo Dib u celi button in ay leeyihiin sir ah oo cusub marka idin illoobi doona sirta farriinta.
c) Waxaa kale oo aad ka heli kartaa in aad xisaabta website-ka Verizon. Waxaad u baahan tahay in ay raacaan tilmaamaha soo socda si aad u hesho farriinta codka password Verizon iPhone dib:
Tallaabada 1. Booqo qaybta My Verizon ee website Verizon ka halkan
Tallaabada 2. Under qaybta My Device waxaad ka heli kartaa celi Voice Mail Password.
Tallaabada 3. Hadda raac talaabooyinka si aad dib password farriinta codka ah.
Tallaabada 3. Halkan waxa aad u baahan doontaa in aad wireless tirada iyo xisaabta password u Verizon. Wixii dagdag ah waxaad dib kartaa password looduubay oo aad iyo aad u tiro kasta oo qoyska ah ee halkan.
Waxaad bedeli 1.Did kaarka sim ama dib aad telefoon dhawaan?
Mar kasta oo aad dib u iPhone ama geliso SIM la lambarka taleefanka kala duwan ee qalab aad. Mail Your cod joojiyo shaqeeyo, iyo in aad aragto yar oo midab cas oo icon shaashadda hore.
In-sida dhacdo, waxaad u baahan doontaa in ay raacaan hannaanka hawlgelinta caadi mail codka si aad u bilowdo adeegga. Hubi in aad qorshe ama bil kasta bixiso sidii aad u tagto qorshe waxay bixisaa adeeg mail cod.
2.Check wac goobaha lagaala
Haddii mail cod aad aan shaqaynayn, talaabada ugu muhiimsan ee aad u baahan tahay in aad qaadato waa si aad u hubiso xaaladda wac hawshooda u soo gudbiyo ah.
Riix goobaha, markaas goobaha telefoonka, ka dibna hubi xaaladda wac lagaala ah. Feature call soo gudbiyo waa in loo leexanayo, iyo daaha waa in sidoo kale muujinaya tirada sanduuqa mail cod aad network gacanta.
Haddii aad hesho wac lagaala in uu yahay off, si fudud u beddelaan in, oo geli lambarka mail cod aad network mobile ee khaanadda oo oranaya "Weeraryahanka in".
Si aad u noqoto dhinaca ammaan, wac network gacanta, una sheeg la mid ah.
3.Check haddii farriimaha firfircoon
Haddii aad u ogaadaan in aad ku jirto shabakadda wanaagsan deegaanka caymiska, una yeedha lagaala ayaa lagu wadaa sidoo kale, laakiin weli aanay suurogal kuu ahayn in la helo wargelinta mail cod, waa in aad hubiso in aad karti qaylodhaan mail cod aasaasiga ah sameeyo.
Hubi in codadka goobaha iyo in la hubiyo in heegan gaadhsiin mail cod ah.
4.Make hubiso in aad iPhone ayaa lagu rakibay oo dhan updates ugu dambeeyey
Arrintan oo uu weheliyo Apple, xitaa bixiyaha adeegga telefoonka gacanta ku hayaa ku diraya goobaha updated ah telefoonka. Mar kasta oo aad ka hesho goobaha side updates, waa inaad hubisaa inaad iyaga si degdeg ah loo soo dajiyo. Sidaas, haddii mail cod aad iPhone ee aan shaqaynayn-kasta oo ay goobaha midig, waa inaad hubisaa in telefoonka ayaa lagu rakibay updates side oo ka shaqaynayso version ugu dambeeyay ee macruufka sameeyo.
5.Contact network telefoonka gacanta
Haddii aan waxba ka shaqeeya, waad nasoo wici kartaa kooxda taageerada aad side ee farsamada ee gargaarka.
Qeybta 5: Sida loo badalo mail iPhone cod qoraal
Diinta cod mails qoraalka waa habka ugu fiican ee dadka jecel in uu akhriyo cod mails ay halkii dhagaysto iyaga. Waxaa jira siyaabo badan oo taas loo sameeyo, waxaad isticmaali kartaa iPhone ee Visual feature Voice Mail, rakibi barnaamijyadooda, ama u isticmaasho adeega codka Google si aad ugu qortid cod-lada iyo iyaga loogu badalo in ay qoraal.
Habkaani ma ogola in dadka isticmaala si ay fariin oo dhan, laakiin dadka isticmaala iPhone magaca qofka mail cod ayaa ka tagay, oo ay la socdaan waqtiga loogu talagalay isku arki karaan. Tani waxay ka caawisaa dadka isticmaala in ay doortaan iyo ciyaaro farriimo muhiim ah si deg deg ah.
Qaar ka mid ah wadayaasha sidoo kale u oggolaadaan dadka isticmaala ay si dhab ah u akhri qayb ka mid ah mail cod ku hoos habkaani. Laakiin sida ku xusan, ka shaqeeya yar oo kaliya ayaa bixiya adeeg la iPhone dalka Maraykanka.
2.Using cod Google
Tallaabada koowaad waa in ay dejiyaan-up tirada cod Google aad xisaabta, iyo dhaqaajiso cod Google aad telefoonka. Markaas, u tag goobaha shuruud wac lagaala aad iPhone oo geli lambarka cod Google, si aad mar kasta oo aan la heli karin, dhammaan soo wacitaanada ee loo gudbin lahaa in account cod Google. Google badalo doonaan fariimaha codka qoraalkeenan oo waxaan ka dhigi laga heli karaa telefoonka.
3.Install codsiyada si loogu badalo mail cod qoraal
Waxaa jira dhowr codsiyada shaqada u qabto, laakiin YouMail Visual Voice Mail waa mid ka mid ah barnaamijyadooda ugu kalsoon tahay oo inta badan la isticmaalo. Free version app ee ma ahan oo keliya badasha mail cod galay qoraalka, laakiin waxa ay sidoo kale bixisaa wac furid, wac routing, auto-reply soo wacaya diraya, iyo qaar ka mid ah qaababka kale.
App wuxuu kuu ogol yahay dadka isticmaala si aad u hubiso mail cod isticmaalaya computer, iPad iyo iPhone. YouMail leedahay in ka badan lix milyan oo dadka isticmaala iyo app ayaa u jawaabay oo in ka badan shan bilyan ku baaqay. YouMail waxaa laga heli karaa laba nooc, version bixiyo oo lacag la'aan ah. Version mushaarka badan yahay haboon xirfadeed ama ganacsi la isticmaalo.
Waxaad dir Visual Voice Mail horumarsan by Irvine, California shirkadda ku salaysan loo yaqaan Youmail, iyo sidoo kale waa la heli karaa isticmaalayaasha android.
Sida loo adag oo iPhone Warbixannada jilicsan
Xalka A buuxi Nadiifinta MacBook / iMac
Xasuusta nadiifi - The Coobbi Mac
> Resource > iPhone > Solutions in celi farriinta codka Password on iPhone (AT & T iyo Verizon)